Deegaanka Bacaadweyne ee Gobolka Mudug, ayaa dadka deegaanka waxa ay xalay ka maqleen laba qarax oo xoogan, waxa ayna sheegeen in Al-Shabaab ay qarxiyeen ceel ay dadka deegaanka biyo ka cabayeen.
Qaraxyadan oo ahaa kuwo xoogan ayaa xalay laga maqlay xaafadaha kale ee Bacaadweyne, sida ay xaqiijinayaan ilo wareedyo kala duwan. Dadku waxay ku sugnaayeen guryahooda waqtigaas, maadaama aanu jirin wax dhaqdhaqaaq ah habeenkii.
Qaar ka mid ah dadka deegaanka ayaa sheegay in ceelka xalay ay qarxiyeen Al-Shabaab oo muhiim u ahaa inta badan qoysaska xoola dhaqatada ah, hadana ay ka fiirsanayaan halka ugu dhow ee ay ka heli karaan biyaha, maadaama ceelkoodii la qarxiyay.
Inta badan dadkii deegaanka ayaa ku barakacay dagaal u dhaxeeya ciidamada dowladda oo kaashanaya dadka deegaanka iyo maleeshiyada Al-Shabaab, mana jiro ilaa iyo hadda wax war ah oo ka soo baxay dhinaca Galmudug.
30 Nofeembar 2020, dagaal ka dhacay Bacaadweyne ayaa sababay dhimasho iyo dhaawac, kadib markii Al-Shabaab ay soo weerartay deegaanka, waxaana laga qaaday sawirro meydadka dhinacyadii dagaallamayay